I-Avanafil (330784-47-9) Ifektri yokwenziwa kwabahlinzeki
I-Avanafil isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile (i-ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukuthola noma ukugcina indalo emadodeni). I-Avanafil isesigabeni semithi esibizwa nge-phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Isebenza ngokwandisa ukugeleza kwegazi ukuya ethweni ngesikhathi sokuvuselelwa kocansi. Ukugeleza kwegazi okwandisiwe kungadala ukwakheka. I-Avanafil ayilaphi i-erectile dysfunction noma ikhulise isifiso sobulili. I-Avanafil ayikuvimbeli ukukhulelwa noma ukusakazeka kwezifo ezithathelwana ngocansi njengegciwane lesifo sokugonywa komuntu (i-HIV, i-hepatitis B, i-gonorrhea, i-syphilis) .Ukunciphisa ingozi yakho yokutheleleka, sebenzisa njalo indlela evimbayo (i-latex noma i-polyurethane ikhondomu / amadamu wamazinyo) phakathi nayo yonke imisebenzi yocansi. Xhumana nodokotela wakho noma usokhemisi ukuthola eminye imininingwane.
Imininingwane ye-Avanafil powder Base
Igama I-Avanafil powder
isisindo Yamamolekhula 483.95g / mol
Melt Point I-150-152 ° C
Formula Yamamolekhula C23H26ClN7O3
Isikhathi sokuqala 30minutes
Ubuwazi ukuthi amadoda angaphezu kwezigidi ezingama-30 e-United States ane-erectile dysfunction (ED)? Lokho kuchaza ukuthi kungani kunemithi eminingi ye-ED edayiswa e-US. Esinye sezidakamizwa ezinjalo i-avanafil. UStendra nguye igama lomkhiqizo le-avanafil ukuze ujwayelane.
I-Avanafil (Stendra) iyi-PDE-5 (phosphodiesterase-type 5) inhibitor evimba i-PDE-5.
Uma uthatha lo muthi, uzokhulula imithambo ethile yegazi nemisipha emzimbeni wakho ukukusiza ukuthi uthole ukwakhiwa ngokwandisa ukugeleza kwegazi uye endodeni yakho. Ngalesi sizathu, isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ED). Njenge-Levitra® (vardenafil), i-Cialis® (tadalafil), ne-Viagra® (sildenafil), i-avanafil izokwenza kube lula kuwe ukuthi umise futhi ugcine ukwakhiwa isikhathi esithile.
I-Avanafil (iStendra®) isha sha, njengoba yathuthukiswa ngeminyaka yama-2000 nguMitsubishi Tanabe Pharma eJapan. I-United States Food and Drug Administration (FDA) yavuma lo muthi ngo-Ephreli 2012 ukwelashwa kwe-ED, kuyilapho i-European Medicines Agency (EMA) yakwamukela ngoJuni 2013.
Kusuka kwabaningi ukubuyekezwa kwe-avanafil, uzobona ukuthi inemiphumela emibi embalwa uma iqhathaniswa ne-Levitra, Cialis, Viagra, neminye imishanguzo ye-ED.
Ake sijule ngokujulile futhi sithole okwengeziwe ngalesi sidakamizwa.
I-Avanafil Ikuphatha Kanjani Ukungasebenzi Kwe-Erectile
Avanafil isetshenziselwa ukwelapha i-ED noma ukungabi namandla, okuchazwa njengokuhluleka ukuthola nokugcina ukwakhiwa. I-Avanafil iwela esigabeni semithi evimbela i-phosphodiesterase.
Qaphela ukuthi ukuze uthole ukwakheka, imithambo yakho yegazi i-penile igcwala igazi. Lokhu kwenzeka lapho osayizi bezitsha zemithambo yegazi banda, ngaleyo ndlela bedlulisela igazi elengeziwe kupipi lakho. Ngasikhathi sinye, ubukhulu bemithambo yegazi ekhipha igazi ethweni lakho lobudoda luzoncipha ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi igazi lihlala kakhulu emisipheni yakho ye-penile, ngaleyo ndlela lisekela ukwakhiwa isikhathi eside.
Uma uvuselelwa ngokocansi, kufanele uthole ukwakhiwa. Lokhu kwakhiwa kuzokwenza ipipi lakho likhiphe i-nitric oxide, isakhi esizodala i-guanylate cyclase (i-enzyme) ukukhiqiza i-cGMP (cyclic guanosine monophosphate), isithunywa esibalulekile esilawula izinqubo eziningi zomzimba.
Empeleni, yile nucleotide eyindilinga ebhekele ukuphumula nokuncipha kwemithambo yegazi ethwala igazi lisuke lize liye endondeni ukudala ukwakhiwa. Lapho enye i-enzyme ibhubhisa i-cGMP, imithambo yegazi izophinda ibuye isayizi yayo yoqobo idale ukuthi igazi lishiye ipipi, futhi lokho kuzokhomba ukuphela kokwakhiwa.
Uma uthatha i-avanafil, izomisa i-PDE-5 ekonakaliseni i-cGMP, okusho ukuthi i-cGMP izohlala isikhathi eside futhi igcine ukwakhiwa kwakho. Uma i-cGMP ihlala isikhathi eside, igazi lizohlala isikhathi eside kupipi lakho futhi ukwakhiwa kwakho kuzothatha isikhathi eside.
Ngabe i-Avanafil (Stendra) iyasebenza yini ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-Erectile?
Yize i-avanafil (iStendra) ingumuthi omusha we-ED, izifundo eziningi zifakazela ukusebenza kwayo ekwelashweni kwe-ED. Kwezinye izifundo ezinhlanu ezenziwa ngo-2014 ukuthola ukuthi lo muthi uyasebenza yini, amadoda angaphezu kuka-2,200 XNUMX abamba iqhaza, futhi onke ayenokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Ekupheleni kwezifundo, i-avanafil itholakale iphumelela kakhulu ekwenzeni ngcono i-IIEF-EF, inkomba yamazwe omhlaba esetshenziselwa ukuhlola izinkinga ezihlobene nokwakhiwa.
Wonke amadoda athathe lo muthi akhombise ukuthuthuka okumangazayo ku-IIEF-EF yawo ngemithamo esukela ku-50 kuya ku-200mg. Imiphumela yocwaningo ibuye ikhombise ukuthi i-avanafil ibisebenza kahle ngemithamo ephezulu ye-200mg. Lokhu kwehlukanisa i-avanafil kweminye imishanguzo ye-ED edala imiphumela emibi emazingeni aphezulu.
Kwesinye isifundo esenziwe ku-2012, i-avanafil itholakale ibekezeleleka kahle futhi isebenza kahle ekwelashweni kwe-ED. Abesilisa ababili ababambe iqhaza ocwaningweni bakhombise ukuthuthuka okuphawulekayo ngemithamo ephakathi kuka-100 kuya ku-200mg.
Ekuvivinyweni komtholampilo okubandakanya i-avanafil, abacwaningi babike ukuthi kukhombisa ukukhuphuka okubalulekile kuzo zonke izinto ezihlobene nokusebenza kwe-ED. Lezi zivivinyo zazibandakanya amadoda angaphezu kwama-600 kubakaki beminyaka engama-23 - 88.
Kafushane, i-avanafil iyasebenza ekwelashweni kwe-ED. Ucwaningo oluningi luye lwafakazela ukuthi lungaveza intuthuko elinganisekayo futhi ebonakalayo ekwakhiweni kwawo wonke amadoda ane-ED, kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki.
Yikuphi okungcono I-Avanafil noma iTadalafil?
I-Avanafil iyisidakamizwa esisha sha se-ED emakethe, kepha isebenza kangcono kunemithi eminingi yakudala ye-ED. Kokubili i-Avanafil noma i-Tadalafil isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile, kepha banokuhluka okuthile ngendlela yabo yokusebenza.
Ngenkathi i-tadalafil (i-Cialis) iyikhambi elisebenzayo lezimpawu ezandisiwe ze-prostate nezimpawu zokungasebenzi kahle kwe-erectile, iStendra imvamisa iyisinqumo sokuqala kulabo abanokungasebenzi kahle kwe-erectile.
I-Avanafil vs Tadalafil: Yimuphi osebenza ngokushesha?
I-Tadalafil nezinye izidakamizwa zokuqala ukungasebenzi kwe-erectile zithatha phakathi kwemizuzu engama-30 kuya ehoreni elilodwa ukuze imiphumela yazo izwakale. Futhi kwezinye izimo, ngemuva kokuthi udle okuthile okusindayo, izidakamizwa zingathatha ngaphezu kwehora elilodwa ukuqala ukusebenza. Lokhu akunjalo nge-avanafil.
Uma uthatha phakathi kuka-100 - 200mg womkhiqizo, uzozizwa umphumela we-avanafil kungakapheli imizuzu engu-15. Okusho ukuthi ungayithatha imizuzu embalwa ngaphambi kokuthi uqale ukuya ocansini. Noma uthatha umthamo ophansi we-avanafil, yithi 50mg, usazothola ukwakhiwa kungakapheli imizuzu engama-30.
I-Avanafil vs Tadalafil: Yimuphi Onemiphumela emibi Emibalwa?
Yize i-avanafil inemiphumela engemihle, le miphumela emibi ayifani neye-tadalafil. I- imiphumela emibi ye-avanafil aziphikisi njengalezo ze-tadalafil. Isibonelo, i-avanafil ayinakwenzeka ukuthi ibangele umfutho wegazi ophansi kanye nokungaboni kahle; imiphumela emibi emibili ehlotshaniswa ne-tadalafil neminye imithi ye-ED.
Enye inzuzo ye-avanafil ukuthi ingathathwa ngamanani aphezulu ngaphandle kokubanga imiphumela emibi. Eqinisweni, amanani aphezulu angafika ku-200mg angathathwa ngaphandle kokukhathazeka nganoma yimiphi imiphumela emibi.
I-Avanafil isebenza ngokwehlukile kwi-tadalafil ngoba ihlose i-phosphodiesterase-type 5 enzyme, ngaphandle kokuhlasela amanye ama-enzyme e-phosphodiesterase afana ne-PDE11, PDE6, PDE3, ne-PDE1.
I-Avanafil Ayithinteki Ekudleni.
I-Tadalafil kanye neminye imithi yesizukulwane sokuqala ye-erectile dysfunction ngokuvamile ayisebenzi kangako ngemuva kokudla ukudla okukhulu kokudla okunamafutha aphezulu. Lokhu kwenza kube yinselelo enkulu ukuzisebenzisa ngoba kufanele ubheke isikhathi sakho sokudla futhi ubuye ube nozwelo ngalokho okudlayo.
Ngakolunye uhlangothi, i-avanafil ayithinteki ekudleni okudliwayo, okusho ukuthi uzowujabulela umphumela we-avanafil noma ngabe udla ini nokuthi udlani. Ngalesi sizathu, kungcono ngisho nokudla ukudla okuphezulu kwamandla ngaphambi kokusebenzisa lo muthi ukuze ube namandla anele okwenza ucansi lwakho.
I-Avanafil vs Tadalafil: Yikuphi okungasetshenziswa ngotshwala?
Kunconywa ukunciphisa noma ukugwema utshwala lapho usebenzisa umuthi we-tadalafil. I-Tadalafil yaziwa ngokwehlisa umfutho wegazi, ngakho-ke ukuyithatha kanye notshwala kungaqhubeka kwehlise umfutho wegazi ube sezingeni elibukhali.
Ukuthatha lesi sidakamizwa ngotshwala kuhlotshaniswa nezimpawu ezinjengokushaya inhliziyo, ukushaywa ikhanda, ukuqhuma, ukuquleka, ikhanda elikhanyayo, nesiyezi. Ngakolunye uhlangothi, iStendra iphephe kakhulu ukuyisebenzisa, noma ngabe seyiphuzile. Ungakujabulela ukunikezwa utshwala obuthathu ngaphambi kokuthatha iStendra, futhi ngeke kube khona imiphumela emibi kanye nezinye izingozi empilweni yakho.
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ungaya kokuzitika ngotshwala bese usebenzisa iStendra. Kufanele uphuze utshwala ngokulinganisela ngoba notshwala uqobo budala izinkinga ezithile zempilo. Utshwala buyisidambisi, futhi uma ubusebenzisa kakhulu, buzonciphisa isifiso sakho sobulili futhi kukwenze kube nzima kuwe ukuthola ukwakhiwa. Kusho ukuthi utshwala buyayiphika imishanguzo ye-ED ehlose ukuyifinyelela.
Njengoba kungabonakala, i-avanafil inezinzuzo eziningi ngaphezulu i-tadalafil. Kungakho odokotela abaningi bethanda ukuyinikeza iziguli zabo.
Lokho Okuzokwenziwa Ngezinye Izidakamizwa Thinta i-Avanafil?
Ngenkathi ezinye izidakamizwa zingasetshenziswa ngokuhlangana, ezinye zingahlanganiswa ukuthuthukisa ukusebenza kwazo. Izidakamizwa ezingakwazi ukuhlanganiswa yilezo ezihlangana futhi zibangele umphumela omubi. Yingakho ngaphambi kokuba ufakwe kunoma imuphi umuthi, yazisa uma usuvele usuthathe omunye umuthi. Lokhu kufanele futhi kube njalo uma ufuna ukushintsha izidakamizwa noma umthamo. Ungenzi lutho uwedwa ngaphandle kokubandakanya umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Isibonelo, welulekwa ngokuqinile ngokungasebenzisi i-avanafil ngokuhambisana nemithi efana neLevitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis), noma iViagra (sildenafil). Le mithi isetshenziselwa ukwelapha i-ED kanye nomfutho wegazi ophakeme (pulmonary). Ngakho-ke ukuwasebenzisa kanye ne-avanafil kungalayisha kakhulu umzimba wakho futhi kudale imiphumela emibi kakhulu.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-avanafil, yazisa umhlinzeki wakho wezempilo ukuthi ngabe uthatha noma imuphi omunye umuthi, ikakhulukazi:
Izidakamizwa ezisetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile.
Noma yimaphi ama-antibiotic anjenge telithromycin, erythromycin, clarithromycin, namanye
Yonke imishanguzo yokulwa nobungozi, phakathi kwayo i-ketoconazole, i-itraconazole, neminye
Noma imuphi umuthi osetshenziselwa ukwelashwa kwesifo sendlala noma umfutho wegazi ophakeme, kufaka phakathi i-tamsulosin, i-terazosin, i-silodosin, i-prazosin, i-doxazosin, i-alfuzosin, nezinye.
Izidakamizwa ze-hepatitis C ezifana ne-telaprevir ne-boceprevir nezinye.
Izidakamizwa ze-HIV / AIDS ezifana ne-saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir, nezinye.
Izinhlu ezingenhla azibanzi neze. Kuneminye imishanguzo efana neDoxazosin neTamsulosin okuthi uma isetshenziswa kanye ne-avanafil kuzoholela emiphumeleni emibi. Ngokwengeziwe, ezinye izidakamizwa eziningi ezithengiswa ekhawunteni nemithi kadokotela zingaxhumana ne-avanafil. Lokhu kufaka phakathi imikhiqizo yamakhambi namavithamini. Iqiniso ukuthi ungasebenzisi noma imuphi umuthi ngokuhambisana ne-avanafil ngaphandle kokwazi kukadokotela wakho.
Akuzona izidakamizwa kuphela okufanele uqaphele ngazo, kepha futhi kufanele uqaphele lapho unezimo ezithile zezempilo. Ngakho-ke ngaphambi kokusebenzisa i-avanafil, yazisa udokotela wakho uma unezinkinga ezilandelayo zezokwelapha.
Ipipi elingajwayelekile - uma unomthondo ogobile noma ipipi lakho linokukhubazeka okuthile okuzalwa nakho, maningi amathuba okuthi impilo yakho ingathinteka uma usebenzisa i-avanafil.
Uma uneminyaka engama-50 noma ngaphezulu
Uma uphethwe yidiski eligcwele, isifo semithambo yegazi, noma amehlo akho anesilinganiso esiphansi senkomishi kuya kudiski, futhi uma uphethwe yisifo senhliziyo noma isifo sikashukela, amazinga anamafutha aphezulu egazini (Hyperlipidemia) noma igazi eliphezulu ingcindezi (umfutho wegazi ophezulu).
Ezinye izimo okufanele uzazise udokotela wakho zifaka:
Izinkinga ezinzima zamehlo
Ubuhlungu obukhulu besifuba (angina)
Ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile (arrhythmia)
Izinkinga ngemithambo yegazi efana ne-idiopathic subaortic stenosis noma i-aortic stenosis
Isifo senhliziyo sibhekane nezinyanga eziyisithupha ezedlule.
Ukuhluleka kwenhliziyo ukulahla
Umfutho wegazi ophansi (hypotension)
Unhlangothi zingakapheli izinyanga eziyisithupha ezedlule
Umdlavuza ohlobene negazi (i-leukemia noma i-myeloma eminingi)
Ama-PDE5 inhibitors, kufakwe i-Stendra, ahlangana namanye ama-CYP3A4 inhibitors kanye ne-alpha-blockers. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukwazisa udokotela wakho uma usebenzisa le mithi. Sekukonke, i-avanafil ingumkhiqizo osebenzayo futhi ophephile wokwelashwa kwe-ED.
I-Avanafil isetshenziswa kakhulu ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile. Ezinye izinzuzo ze-avanafil zifaka phakathi ukuthi isebenza ngokushesha kunayo yonke eminye imithi esetshenziselwa ukwelashwa kwe-ED. Ungayithatha imizuzu eyishumi nanhlanu ngaphambi kokuya ocansini futhi isazosebenza.
Enye inzuzo ye-avanafil ukuthi akudingeki ukuthi uyithathe nsuku zonke ukuze usebenze, ungayithatha njengoba uyidinga futhi lapho uyidinga khona. I-Avanafil ibekezeleleka kahle emzimbeni futhi ingathathwa ngokudla noma ngaphandle kokudla. I-Avanafil ayinayo imiphumela emibi eminingi njengeminye imithi ye-ED, futhi ungayithatha ngemuva kokuphuza utshwala.
Ukwelashwa kwe-ED kungenye yezindlela ze- ukusetshenziswa kwe-avanafil. Lo mkhiqizo uphinde usetshenziselwe ukwelashwa kwesimo sikaRaynaud, ukugula okuholela engxenyeni ethile yomzimba ukuzwa ukubanda nokundikindiki. Isimo sikaRaynaud senzeka lapho ukwehla kokugeleza kwegazi kuye engxenyeni yomzimba, njengamakhala, amadolo, izingono, izinzwane nezindlebe. Lesi simo sidala nezinguquko kumbala wesikhumba.
Ungazuza Kanjani Kakhulu Kusuka ku-Avanafil
I-Avanafil izokusiza ukuthi uthole ukwakhiwa, kepha lokho akusho ukuthi ungayiqeda i-foreplay. Ngakho-ke ngaphambi kokuya ocansini, hlanganisa umlingani wakho ekubekeni phambili ngendlela obuyokwenza ngayo ngaphandle kokuthatha umuthi. Khumbula ukuthi i-avanafil izokusiza kuphela ukuthola ukwakhiwa lapho uvuswa ngocansi.
Ungaphuzi utshwala obuningi ngaphambi kokusebenzisa i-avanafil. Utshwala obuningi bungakuvimbela ekujabuleleni umphumela we-avanafil ngokugcwele. Ukuhlanganisa utshwala ne-avanafil kungadala imiphumela emibi efana nesiyezi okuzokwehlisa ukusebenza kwakho ngokocansi nokusebenza.
Gwema ukuphuza ijusi lamagilebhisi kungakapheli amahora angama-24 ohlela ukuthatha i-avanafil bese uya ocansini. Ijusi lamagilebhisi liqukethe amakhemikhali athile azokhulisa amazinga e-avanafil egazini lakho ngakho-ke kwandisa amathuba okuba nemiphumela engemihle.
Hlonipha ama-aphoyintimenti akho nomhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo ukuze abheke intuthuko yakho. Uma uhluleka ukuthola i-erection nangemva kokuthatha i-avanafil nokuzibandakanya ne-foreplay, noma uma uthola ukwakhiwa, kepha akuhlali isikhathi eside ngokwanele ukuya ocansini nokufinyelela ku-orgasm, udinga ukwazisa udokotela wakho.
Okufanayo kuyasebenza uma i-avanafil ibonakala inamandla kakhulu kuwe; lapho ukwakhiwa kwakho kubonakala kungapheli ngemuva kokuthi usuqedile ukwenza ucansi. Yazisa udokotela wakho ngalokhu ukuze anciphise umthamo wakho. Futhi, khumbula ukuthi ungathathi ngaphezulu i-avanafil kunalokho okushiwo udokotela wakho.
Usebenzisa i-Avanafil (Stendra)
Ukuze i-avanafil isebenze, kungasiza uma uyithatha njengoba kuchazwe ngudokotela wakho. Udokotela uzokutshela ukuthi ungathatha malini futhi ngasiphi isikhathi.
Njengeminye imishanguzo yokungasebenzi kahle kwe-erectile, i-avanafil kulula ukuyisebenzisa. Umuthi ufika ngefomu le-powder noma le-tablet. Njengoba i-avanafil isebenza ngokushesha, udinga ukuyithatha phakathi kwemizuzu engu-15 - 30 ngaphambi kocansi. Uma udokotela wakho ekufunela umthamo ophansi we-avanafil, yithi u-50mg ngosuku, kunconywa ukuthi uthathe lesi sidakamizwa hhayi ngaphansi kwemizuzu engama-30 ngaphambi kocansi. Leyo yindlela engcono yokuqinisekisa ukuthi umzimba wakho uwuthatha ngokuphelele umuthi. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ungathatha i-avanafil powder lapho ulambile ngeke ibe nomthelela omubi emzimbeni wakho.
Kunconywa ukuthi uphuze lo muthi kanye kuphela ngosuku. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uzoqapha ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani emthini futhi angakulungisa umthamo ukuze uthole izinzuzo ezigcwele ze-avanafil.
Ukuba ngumuthi kadokotela, kuzofanele ukhulume nodokotela wakho ukukunikeza incwadi kadokotela ngaphambilini i-avanafil buy. Udokotela uzokubuza imibuzo eminingana futhi, uma kungenzeka, enze izivivinyo ezithile ukuthola ukuthi iyiphi isilinganiso se-avanafil esifanele wena ngokuya ngokujwayelekile zezempilo, ubudala, kanye neminye imithi ongayisebenzisa. Namathela ekusebenziseni kwe-avanafil njengokwemininingwane ekwilebula yomkhiqizo noma njengoba kukhonjisiwe ngudokotela wakho. Khumbula ukuthi i-avanafil ayiphathi izimo zezokwelapha ngaphandle kwe-ED ne-Raynaud's phenomenon.
I-Avanafil itholakala ngamandla amathathu ahlukene: 50, 100, kanye no-200mg. Kungenzeka ukuthi udokotela wakho akuqale ngamandla we-100mg, kepha angaguqula umthamo ngokuya ngokuthi umzimba wakho uphendula kanjani. Ngaso sonke isikhathi uma uthenga i-avanafil powder, hlola ilebula ukuze uqiniseke ukuthi unamandla afanele obekelwe wona.
Ukuhlolwa kwe-ED kumele kufake phakathi ukuhlolwa okuphelele kwezokwelapha ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini izimbangela, futhi kunqume nezinye izindlela zokwelashwa. Isibonelo, inhlanganisela yezinkinga ezingokwengqondo nezingokomzimba ingadala i-ED.
Ezinye izimo zomzimba zihamba kancane ekuphenduleni ngokocansi okuholela ekukhathazekeni okungathinta ukusebenza kocansi. Lapho lezi zimo zilashwa, idrayivu yezocansi ingabuyiselwa. Izimbangela ezivamile zomzimba ze-ED zifaka:
I-atherosclerosis (imithambo yegazi evalekile)
I-Metabolic syndrome - Lesi yisimo lapho kwanda khona umfutho wegazi, amazinga e-insulin, i-cholesterol, namafutha omzimba.
Isifo sikaPeyronie - uma izicubu ezibomvu zikhula epeni
Ukuphuza ngokweqile nokusebenzisa kabi izidakamizwa / izidakamizwa
Ukulimala noma ukuhlinzwa entanjeni yomgogodla noma endaweni ye-pelvic
Ukwelashwa komdlavuza we-Prostate noma we-Prostate
Ubuchopho budlala indima enkulu ekuvusweni ngocansi. Izinto eziningana ezithinta ukukhuthazwa ngokocansi kuqala ebuchosheni. Izimbangela ezingokwengqondo ze-ED zifaka:
Ukukhathazeka, ukudangala, noma ezinye izimo ezithinta ingqondo zezempilo
Izinkinga zobudlelwano ezibangelwa ukungaxhumani kahle, ingcindezi, noma okunye ukukhathazeka
Impilo yocansi engagculisi
ukuzinyeza noma amahloni noma
Ukwehluleka ukumithisa umlingani wakho
Ngaphambi kokuba umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anikeze i-avanafil kuwe, ngeke abheke izingqinamba ezingenhla kuphela, kodwa futhi nakokulandelayo:
Uma unesimo senhliziyo esivele sikhona, ungaba nengozi yenhliziyo lapho uzibandakanya ocansini. Ngalesi sizathu, ukwelashwa kokungasebenzi kahle kwe-erectile usebenzisa i-avanafil akunconyelwe labo abanesimo senhliziyo nemithambo yegazi.
Iziguli ezinama-ventricles angakwesobunxele aphazamisekile noma lezo ezinokukhubazeka kokulawulwa kwengcindezi yegazi ezizimele zithinteka ku-Stendra nakwamanye ama-vasodilator.
Ukwakhiwa isikhathi eside
Abanye abasebenzisi be-PDE5 babike ukwakhiwa okuhlala isikhathi esingaphezu kwamahora amane. Abanye baphinde babika ama-erections abuhlungu ahlala isikhathi esingaphezu kwamahora ayisithupha (priapism). Uma uhlangabezana nanoma iyiphi yalezi zimo, kufanele ufune usizo oluphuthumayo lwezokwelapha. Lokhu kungenxa yokuthi izicubu zakho zepenile zingalimala uma ulibala futhi ungalahlekelwa amandla akho unomphela.
Iziguli ezinokukhubazeka kwe-penile anatomical (isifo sikaPeyronie, i-angulation, noma i-angulation) kufanele zisebenzise i-avanafil ngokuqapha okukhulu. Ngokunjalo, lezo ziguli ezinezimo ezingadala ukungakhathaleli kufanele futhi ziqaphele lapho zisebenzisa i-avanafil.
Uma uhlangabezana nokulahleka kombono ngenkathi usebenzisa iStendra noma amanye ama-PDE5 inhibitors, kufanele wazise udokotela wakho ngokushesha okukhulu ukuze uthole ukunakekelwa okufanele kwezokwelapha.
Ukulahleka kombono kungaba uphawu lwe-NAION, isimo esenzeka kwabanye abantu abasebenzisa ama-PDE5 inhibitors. Kusuka kwabaningi ukubuyekezwa kwe-avanafil, uzobona ukuthi lesi yisimo esingajwayelekile, kepha kufanele usazi.
Lesi ngesinye isimo esingajwayelekile esihlotshaniswa nama-PDE5 inhibitors. Uma usebenzisa i-avanafil futhi uzwa ukulahleka okungazelelwe noma ukwehla kokuzwa, yazisa udokotela wakho ngokushesha okukhulu. Ukulahleka kokuzwa kuvame ukuhambisana nesiyezi noma i-tinnitus, kepha akucaci ukuthi lezi zimpawu kumele zivele kuma-PDE5 inhibitors.
Kuphezu kodokotela ukuthola imbangela yangempela yalezi zimpawu, kepha uma kwenzeka uhlangabezana nazo, kungasiza uma uyeka ukuthatha i-avanafil uze uthole ukuxilongwa okufanelekile kudokotela.
Imiphumela emibi ye-Avanafil
UStendra uyi Ephephile, umuthi osebenzayo onemiphumela emibi embalwa kuphela, akukho nowodwa owandile. Isibonelo, ukuphathwa yikhanda, umphumela ohlangothini ovame kakhulu we-Stendra, kuthinta kuphela amaphesenti amahlanu kuya kwayishumi abesilisa abasebenzisa lo muthi.
Omunye umphumela ohlangothini oluvamile we-avanafil uyashaywa. Kusuka ekubuyekezweni kwe-avanafil, kutholakele ukuthi lesi simo senzeka phakathi kwabasebenzisi abangu-3 - 4%. Ukuphathwa yikhanda nokuhlanza kubangelwa umphumela we-avanafil ekugelezeni kwegazi futhi le miphumela emibi ivame ukubuna ngemuva kwamahora athile. Eminye imiphumela emibi ye-avanafil ifaka ukucinana kwamakhala, izimpawu ezibandayo (i-nasopharyngitis), nobuhlungu beqolo. Yonke le miphumela emibi ye-avanafil ivela kumaphesenti amancane wabasebenzisi.
Ingabe uyafuna thenga i-avanafil? Uma kunjalo, kufanele ukhethe umhlinzeki othembekile we-avanafil ongakuqinisekisa ukuthi i-avanafil powder oyithengayo isezingeni eliphakeme kakhulu. Singumhlinzeki onjalo. Sikhipha imikhiqizo yethu ngqo ku-CMOAPI, umkhiqizi odumile we-avanafil.
I-CMOAPI ayikhiqizi i-avanafil kuphela kepha nezinye izidakamizwa zokungasebenzi kahle kwe-erectile. Ungakhathazeki ngezindleko ze-avanafil. Sifuna ukusebenzisana nawe ukukunikeza nge-avanafil iminyaka eminingi. Kungakho izindleko zethu ze-avanafil zilula kakhulu ephaketheni.
"I-FDA ivuma iStendra ngokungasebenzi kahle kwe-erectile" (Ukukhishwa kwabezindaba). Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa (i-FDA). Ephreli 27, 2012.
"I-Spedra (avanafil)". I-European Medicines Agency. Ibuyiswe ngomhlaka 17 Ephreli 2014.
I-US 6797709, u-Yamada K, uMatsuki K, u-Omori K Kikkawa K, "Amakhemikhali ajikelezayo ane-nitrogen aqukethe ama-cyclic 6 anamalungu ayi-11", akhishwe ngo-2003 kuDisemba XNUMX, abelwe iTanabe Seiyaku Co
"IVIVUS Imemezela Ukubambisana kwe-Avanafil neMenarini". IVivus Inc. Ifakwe kungobo yomlando kusuka kokwangempela ngo-2015-12-08.
“IVIVUS neMetuchen Pharmaceuticals Memezela Isivumelwano Samalayisense Samalungelo Okuhweba ku-STENDRA”. Vivus Inc. 3 Okthoba 2016.